Soo -saareyaasha Alaabada - Warshadaha Alaabada Shiinaha & Alaab -qeybiyeyaasha
Shaah huruud ah
OEM UK Organic Degdeg ah ...
Heerarka caadiga ah ee la qalajiyey ...
Iibiyaha ugu fiican Saudi Arabia te ...
Tayada Sare dhaldhalaalka Whistli ...
Shaah cagaar cagaaran oo uumi ah
Waqtiga diyaarinta shaaha ： 3 daqiiqo
Geedi socodka cusub ee uumi -baxa shaaha cagaaran wuxuu hayaa chlorophyll badan, borotiin, amino acid, walxo udgoon iyo waxyaabo kale, oo sameeya astaamaha tayada “saddex cagaar iyo mid qabow”, taas oo ah, midabka cagaaran, midabka maraq cagaaran oo khafiif ah, hoose caleen cagaaran; Maraqa shaaha wuxuu dhadhamiyaa mid cusub oo huruud ah, oo leh urta badda ee digirta mung ama xabadka.
Udugga hodanka ah ee shaaha osmanthus wuxuu yareyn karaa shucuurta kacsan. Cabitaanka shaaha osmanthus wuxuu dheelitiri karaa habdhiska neerfayaasha wuxuuna cusboonaysiin karaa maskaxda. 2.Ka takhalus neefta xun Shaaha Osmanthus wuxuu leeyahay ur fiican, shaaha polyphenols ee shaaha ku jira ayaa milmi kara dufanka, wuxuu baabi'in karaa urta afka ku jirta, badanaaba cab shaaha osmanthus wuxuu u aadi karaa neef xun, dadka ha ka buuxsamaan caraf. 3. Jooji qufaca oo yaree xaakada shaaha osmanthus ee udgoonka leh waxaa ku jira walxo udug leh, wuxuu mijin karaa xaakada, kor u qaadi karaa diskka ...
Matcha, oo sidoo kale loo yaqaan shaaha ugu dambeeyay, wuxuu ka soo jeeday boqortooyadii Sui iyo Tang ee Shiinaha. Habka ayaa ah in gu'ga la ururiyo caleemo shaah oo dhallinyaro ah, la uumiyo, oo laga dhigo shaaha keega (sida kooxda shaaha) si loo ilaaliyo. Marka la gaaro waqtigii wax la cuni lahaa, shaaha keegga ayaa la dubaa oo lagu qallajiyaa dabka. Taas ka dib, waxaa lagu jajabiyaa budada dhagax dhagax dabiici ah. Kadibna waxaa lagu shubaa weelka shaaha oo lagu shubaa biyo karkaraya, shaaha ku jira baaquli waxaa si buuxda loogu qasay cajaladdii shaaha si ay u soo saarto qallajin.
Tayada Sare Gardenia Shaaha Shaaha Caafimaadka Leh
100% Dhir daahir ah oo tayo sare leh, ubaxu waa dhammaystiran yahay, midabku waa dabiici, dhadhanku waa mid gaar ah, udugguna waa wacan yahay.
Carefully Si taxaddar leh oo nadiif ah gacanta loo xushay, nuugta nuxurka dabiiciga ah, hodan ku ah nafaqooyinka iyo udugga.
Si aad ah loogu isticmaalo udugga qurxinta, oo ku habboon biyo qoynta, boorashka, qubeyska ilmaha iyo cadarka ubaxa.
Iyada oo leh caleemo cagaaran oo dhalaalaya iyo ubaxyo xagaaga cad cad oo aad u udgoon, ayaa si weyn loogu adeegsadaa jardiinooyinka ku jira cimilada diiran iyo cimilada hoose, iyo sida geedka guriga ee gobollada qabow.
Varieties Noocyo badan ayaa loo beeray beerista, oo leh koboc hooseeya, iyo qaabab waaweyn iyo ubax dheer, waxay leedahay faa'iidooyin badan oo laga dhalan karo iyada oo lagu daro cuntadaada.
OEM UK Organic Organic Peach Oolong Shaaha dhadhan Pearl Caanaha Xumbo Shaaha Qalab Qalab Waxyaabaha Maaddada Shaaha Caanaha
Shaaha oolong peach waa isku darka caleenta shaaha oolong iyo miraha fersken ee dabiiciga ah ee la qalajiyey. Waxaad ka heli kartaa jajabyo miro guduud ah oo la qalajiyey. Dhadhanka shaaha oolong wuxuu si fiican ula socdaa dhadhanka macaan iyo caraf udgoon ee fersken.
Heerkulka caadiga ah ee la qalajiyey ee yasmiin bud ubax ah ee ugu sarreeya luulka yasmiin ee ku jira bacaha shaaha
Jasmindeena, oo gaadhaysa heerka darajada cuntada, ayaa laga soo xushay kuwa ugu fiican oo si dabiici ah loo qalajiyey iyada oo aan la marin wax kiimiko ah. Lavender qalalan ayaa loo isticmaali karaa shaah ubaxeed oo ah doorasho aad u wanaagsan daryeelka caafimaadka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa soo saaridda saliidda jasmine iyo soosaarka saabuunta.
Iibiyaha ugu fiican Sacuudi Carabiya shaaha digsiga qaxwada kafeega xarkaha dhaldhalaalka
Nooca: Kettles Water
Nooca Birta: Birta Kabka
Shahaadada: CE / EU, CIQ, Eec, LFGB
Astaamaha: Waari kara, Kaydsan
Goobta Asalka: Zhejiang, Shiinaha
Shaaha Mee Shaaha 41022 Kaadhka Iibinta Ugu Wanaagsan ee Xumbo Caw Chun Mee Shaaha 41022
Nooca Badeecada: Shaaha Cagaaran
Nooca: Shaaha Chunmee
Da'da: 2 - 3 Sano
Style: Shaah dabacsan
Nooca Farsamaynta: Walaaqay
Baakadaha: Boorso, Sanduuq, Jumlado, Qasac (qasacadaysan), Xidhmada Hadiyadda, Xidhmada Vacuum
Takhasuska: Shaaha Caafimaadka, SHAHA DHAQANKA
Shahaadada: HACCP, ISO, QS
Ctc Shaaha Madoow ee Dhulka Sare ee Tayada ugu Fiican Ctc Shaaha
Nooca Badeecadda: Shaaha Madow, Shaaha Madow
Nooca Hawl-qabadka: Laba-Farxad
Takhasuska: Shaaha Caafimaadka, Shaaha Dabiiciga ah
Baakadaha: Bacaha, dhalada, Sanduuqa, Jumlada, Can (Qasacsan), Koob, Xidhmada Hadiyada, Mason Jar, Sachet, Xidhmada Vacuum
Shaaha Alpine Cagaaran ee Shiinaha JianDe Bao Shaaha Shaaha Cagaaran
Jiande Bucha, oo sidoo kale loo yaqaan Yanzhou Bucha, waa shaah cagaaran oo nus-duban oo orchid ah. Waxaa laga soo saaray buuraha iyo dooxooyinka Meicheng iyo Sandu, Jiande City (oo hore loo yiqiin Yanzhou), Hangzhou City, Gobolka Zhejiang. Jiande Bao Tea waxaa la sameeyay 1870 -kii, habka wax -soo -saarkiisuna wuxuu ka yimid shaaha Sichuan Mengding iyo shaaha Anhui Huangya, oo markii hore iska lahaa Huangtu
Shaaha Cagaaran ee Alpine ee Shiinaha Yongxi Huoqing shaaha cagaaran
Yongxi Huoqing, oo ah takhasus u leh Degmada Jing, Gobolka Anhui, waa tilmaam juquraafi ahaan wax soo saarka beeraha qaranka. Yongxi Huoqing waxaa iska leh shaah luul ah oo leh taariikh wax soo saar in ka badan 500 oo sano. Waxay ahayd mar shaah cashuuri ah dhammaan boqortooyooyinkii. Waxaa lagu soo saaraa Fengkeng, Pankeng iyo Shijingkeng Wantou Mountain, 70 kiilomitir bariga magaalada Jingxian, Gobolka Anhui. Yongxi Huoqing wuxuu leeyahay muuqaal gaar ah oo qurux badan, oo leh miro jilicsan oo culus, cagaar mugdi ah oo dhalaalaya, oo si cufan u daboolay lacag.
123456 Xiga> >> Bogga 1 /6
No. 29, Waddada Guangming, Shuxi Street, Degmada Wuyi, Magaalada Jinhua